प्रचण्ड र ओलीले आफनै पार्टीका नेतालाइ के निर्देशन दिए ? Globe Nepal News Portal
प्रचण्ड र ओलीले आफनै पार्टीका नेतालाइ के निर्देशन दिए ?
काठमाण्डौं,पुष २६ गते । बुधवार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त वैठक गरे । उपचारको लागि वैंकक जानु अघि बालकोटमा भएको वैठकमा दुवै अध्यक्षले पार्टी एकताको लागि गठन गरिएको संयुक्त वार्ता टोलीलाइ सामुहिक सन्देश पनि दिए । बैठकमा अाेली र प्रचण्डले कार्यदलले काम गर्ने कार्यविधि र कार्यदेशका बारेमा दिशानिर्देश गर्नुभएकाे थियाे।
काठमाण्डौं,माघ ४ गते । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य दीपक गिरीले पार्टीको वैठक नै...